Imali mboleko yasekhaya kwi-intanethi, ungayifaka njani i-akhawunti yakho? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Imali mboleko yasekhaya kwi-intanethi, ungayifaka njani i-akhawunti yakho?
Ukuze ungene kwi-ofisi yakho yemali mboleko yekhaya, kufuneka uqhagamshele ibhanki ye-Intanethi. Kwiwebhusayithi yebhanki kukho unxibelelwano kunye nebhanki kwi-Intanethi (ungatsalela umnxeba). Apho, umqhubi urejista wena, ufumana igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye yiyo yonke loo nto. Ungafaka iakhawunti yakho.
Ibhanki yetyala yasekhaya ibonelela ngeendlela ezimbini zokungena kwiAkhawunti yakho: ngeNkqubo yeBhanki-yabaThengi kunye nokusebenzisa isoftware kwi-smartphone yakho. Kuzo zombini iimeko, kuyakufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kwaye xa ungena nge-IB-kunye nesiqinisekiso seSMS.
Ndibambisene nale bhanki ixesha elide, ndifuna ukuthi ngamanye amaxesha kube nzima ukungena kwikhabhathi ye-Intanethi, umsebenzi wezobugcisa uyaqhubeka. Kwaye, ukuba ezinye iibhanki zilumkisa ngomsebenzi onjalo kwangaphambili, ukuba unemali mboleko yeKhaya, uya kufumanisa emva kwento.
Sebenzisa iakhawunti yakho Ibhanki yetyala yasekhaya Ungalufumana lonke ulwazi oluneenkcukacha malunga neenkonzo ezahlukeneyo, kunye nemiba ekhethekileyo yokuhlawula iimali mboleko, unokufumana lonke ulwazi oluneenkcukacha malunga nale bhanki, nendlela onxibelelana ngayo nomphathi.
Ukuze ungene kwi-ofisi yakho yemali mboleko yakho, kufuneka ungenise isicelo esithile kule nkonzo kwisebe okanye kwibhanki ngokwayo.Emva koko, uya kunikwa ipaswedi kunye nokungena ngemvume.Ungaya kwiakhawunti yakho yobuqu apha.
Kwaye ufake ezi nkcukacha kwinkqubo, emva kokuba ufikile kwiakhawunti yakho.
Kukho enye indlela yokungena, kwaye kule ungasifaka isicelo sakho esihambelanayo kwi-smartphone yakho.
Ngasihlandlo sithile, ndandingumthengi weBhanki yeTyala laseKhaya, ngelixa kwakungekho nkonzo zilula njenge Ukungena kwiakhawunti yakho. Namhlanje zimbini izinto onokukhetha kuzo:
ngenkqubo yeBhanki-yabaThengi, ngokunjalo
ngokusebenzisa usetyenziso lweselula efakwe kwi-smartphone.
Ukungena eofisini, kufuneka ufake igama lakho lokungena, iphaswedi kunye nokuqinisekiswa kweSMS (isiqinisekiso - kuphela xa ungena ngebhanki ye-Intanethi).
Njengoko sele kuphawuliwe, ngamanye amaxesha iba yingxaki ukufaka i-akhawunti yakho, njengoko umsebenzi wezobugcisa uhlala ufumaneka. Umzekelo, eZapsibkombank isaziso ngaphambi kwexesha sifika ngela xesha ibhanki ye-Intanethi ingasebenzi ngenxa yezizathu zobugcisa, kodwa akukho nkonzo injalo eKhaya, engalunganga kakhulu.
Ukuqala, yiya kwiwebhusayithi yaseRussia esemthethweni yebhanki quot; Ikhredithi yasekhaya ;. Ukuba undwendwela indawo okokuqala, intengiso yebhanki ihlala iboniswa kwimizuzwana embalwa.
Ke, nakweyiphi na imeko, iphepha eliphambili lesiza liyavela.
Ukundwendwela indawo, jonga kwikona ephezulu ngasekunene kwiphepha eliphambili- kukho amaqhosha amabini - quot; Ngena kwiBhanki ye-Intanethi; kunye ne & quot; Ngena kwikhompyuter kwikharityhthi; Ukungena kwiBhanki ye-Intanethi kufuneka unegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Unokufumana igama lokungena kunye nephasiwedi kwisebe lebhanki. Ukuze unxibelelane nebhanki ye-Intanethi, ungatsalela umnxeba isi-8 (800) 700-80-06 (kwiRussian Federation). Ipasigama yinto yethutyana kuphela-kuya kufuneka uyitshintshe emva kokungena ngemvume. Nxibelelana nenombolo efanayo ukuba uyilibele iphasiwedi.
Ukuba ucofa kwi-quot; Ngena kwi-akhawunti yakho yekhredithi, uya kucelwa ukuba ufake inombolo yefowuni, umhla wakho wokuzalwa, kwaye emva koko uqinisekise ngekhowudi ye-Captcha.
Ukuze ube nokufikelela kwiakhawunti yakho yeBhanki yeKhredithi yaseKhaya, kufuneka ube unegama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo, oya kuthi unikezwe ebhankini emva kokungenisa isicelo. Okulandelayo, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yebhanki ku-wthomecredit.ru Kwikona lasekunene lephepha sibona iqhosha elihambelanayo:
Sinqakraza kweli qhosha nakwifestile evulayo, faka idatha evela kwimvulophu.
Kule webhusayithi ungasebenzisa iinkonzo zokubhankisha kwi-Intanethi;
Inokunxibelelana nokusetyenziswa kwesicelo esineeplatifomu ezahlukeneyo. Kwakhona kweli phepha kukho ikhonkco lokucebisa ngokhuseleko.
Ukufaka i-akhawunti yakho yasebhankini kwi-intanethi, unokulandela ikhonkco. Ngena kwikona ephezulu yesikrini. Ukungena, kufuneka ungene kwaye iphasiwedi iya kubonelelwa ebhankini. Qiniseka ukuba unikela ingqalelo ukuba ikhonkco xa ukhuphela iprofayili yakho kufuneka liqale kwi-https, ebonisa ukuba ungenise indawo ekhuselweyo.
Ukwenza oku, yiya kwigosa. Iwebhusayithi yale bhanki kule link:
Kwikona ephezulu ekunene kukho ukhetho lwe-Qu; INTERNET BANK QuOT; -qakraza kuyo.
Kuya kubakho iphepha elitsha eline-quot; I-WELCOMEquot; Apho kufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, ekufuneka sele ekunye nawe.
Ukuba azikho, ungasebenzisa iindlela ezimbini:
Nxibelelana nesebe. ibhanki apho ubhala i-specials. isicelo sokufaka isicelo kunye nokubhaliswa kwale sevisi (ubukhulu becala uya kufumana igama lokungena kwangoko, kwaye iphasiwedi iya kuza kwifowuni yakho);
okanye utsalele umnxeba kwinombolo (jonga ngezantsi), apho ufuna ukuba negama lokundwendwela. idatha.
1. Ngenisa ukukhangela (nayiphi na, nokuba isuka kuYandex, nokuba isuka kuGoogle) igama lebhanki. Kunokwenzeka ngesiRashiya.
2. Imagazini yokuqala ngokukhawuleza isinika idilesi yewebhu esemthethweni I-Intanethi Ikhredithi yeBhanki- www.homecredit.ru
3. Landela ikhonkco. Phambi kokuba sivule iphepha:
4. Ngasentla kwesikrini kukho iqhosha elithi: Ngena kwi-Intanethi yebhanki; (Ndikrwelele umgca ngomgca oluhlaza). Kufuneka uyikhethe. Ungalibali ukukhetha ummandla wakho ngaphambi koku.
5. Ngaphezulu, emva kokuchofoza kwiqhosha elifanelekileyo, kuya kubakho ukubuyisela kwakhona kwiphepha elitsha apho ufuna ukucacisa ukungena kunye nephasiwedi kwiakhawunti yakho.
Kunconywe kakhulu ungakhumbuli ipasigama Kungenxa yezizathu zokhuseleko.
Ewe, kunjalo kuphela! Ngethamsanqa!
Kufuneka ungene kwiBhanki yeKhaya kwi-intanethi ngebhanki kule dilesi - www.evzgoram.ru
Apho, kumantla asekhohlo ephepha kukho isicatshulwa esingena kwiBhanki yeIntanethi, kwaye apha kufuneka ucofe igama lokungena.
Ukufaka i-akhawunti yakho yasebhankini kwi-intanethi, kufuneka ube unegama lomsebenzisi kunye negama eliyimfihlo. Banikwa ngumsebenzi wasebhankini, kungcono ukuba ucele uncedo kwisebe lebhanki kwangoko. Emva koko iphasiwedi yethutyana kufuneka itshintshwe ngokukhawuleza.
Gcina unxibelelwano lwakho lukhuselekile. Xa ungena, ibha yedilesi kufuneka iqale ngo-https:
Ngaphandle koko, inokuba yindawo enesikram, nangona kunjalo, abantu kunqabile oku. Kodwa kufuneka ulungele.
Ungazikhusela nakwibhanki ye-Intanethi ngale ndlela - khetha umnyango onokhuselo olongezelelweyo ngohlobo lweSMS.
Imibuzo ye-23 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,380.